Home News SAWIRO:-Qaraxyadii Baaydhabo ka dhacay iyo Qasaaraha oo sii Kordhaya!
SAWIRO:-Qaraxyadii Baaydhabo ka dhacay iyo Qasaaraha oo sii Kordhaya!
Laba qarax oo is xig xigtay ayaa maqribnimadan caawa ah waxa ay ka dhaceen bartamaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, sida ay MUQDISHO ONLINE u sheegeen masuuliyiinta Koonfur Galbeed.
Wariyaha Risaala ee magaalada Baydhabo ayaa soo sheegaya in Afar ay ku dhinteen qaraxa ka dhacay hotel Bilan, kuwaasi oo dhammaantood ahaa shacab.
Qaraxyadan ayaa muujinaya heerka amni ee magaalada Baydhabo iyada lagu guda jiro abaabulka iyo diyaar garowga ku aadan doorashada la qorsheeyay inay dhacdo 17-ka November ee sanadkan
Previous articleNisa oo shaacisay in Xusseen Cusmaan Xusseen Hay’adda ka Ruqseeystay Warqadiisa Iscasilaadna u Gudbiyay Madaxweyne Farmaajo
Next articleWar Deg Deg ah:-Agaasimaha Hay’adda Nabad-Sugida iyo Sirdoonka Qaranka oo Si Rasmi ah Iskucalisay!!
Eng Cameey oo Weerar afka ah ku qaaday Madaxweyne muuse Biixi!!